wheel Rear Derailleurs Baaskiilka khafiyad wheel jockey dhalista dhoobada
* Miisaanka wheel 14T guide ilig cidhiidhi oo dhan: 12g
* Waxyaabaha: daawaha aluminium AL7075-T6 CNC machining
* Size Rakibaadda: 6mm / 5mm / 4mm
* Color: Anode cas, dhaldhalaalka, buluug ah, oo dahab ah, titanium
* Sita; kubad birta / dhalista / sita dhoobada dhoobada hybrid
* Baaxadda codsiga, waayo, giraangirta guide hoose ee gudbinta, fadlan isticmaal wheel guide ilig cidhiidhi oo dhan ka 12T la khafiyad this.
* Alaabta Tani laga sameeyey oo bar wareega AL7075-T6 CNC. Waa dhammaatay mindi diamond, ayaa texture biraha diamond-sida, iyo muuqaalka kore ee sheyga waa adkaysi u index khilaaf. All wanaagsan. Qabatinka keeno dahaarka kubad birta Japan, wareeg ah ayaa iska caabin ah ma, kaas oo si weyn u yaraynaysaa caabiga frictional iyo hagaajinaysaa oolnimada saaran gaadiid ah.
Baaskiilka Derailleur Biriigu Cable
Baaskiilka Derailleur khafiyad
KTPD-23 Self-Lock Baydalka